Turkiga oo qabanaya shir weeyne caalami ah oo looga hadlayo arinaha Soomaaliya. | raascasayrmedia.com
← War deg deg ah:Idaacadaha somaliweyn iyo tusmo oo albaabada leesugu dhuftay
Guudoomiyaha Barlamaanka oo maanta Booqday Xarunta golaha Shacbiga Soomaaliyeed. →
April 21, 2010 · 5:20 pm
Turkiga oo qabanaya shir weeyne caalami ah oo looga hadlayo arinaha Soomaaliya.
Dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in ay qaban qaabineyso Shirwayne lagu dhamaynayo xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan wadanka Soomaaliya .
Sida laga soo xigtay xoghayahayaha wasaaraadda arimaha dibadda ee wadanka Spian haweenayda Anjal lossaada , ayaa sheegtay in wadanka Turkiga uu qorshaynayo Shirkaan caalamig ah ee loo qorsheeyay in uu wadanka Turkiga ku qabsoomo bartamaha bisha may ee nagu soo aadan .
Maalintii talaada ayaa wasiiraka armimaha dibadda ee dalkaasi ka dhawaajiyay in sidoo kale lagu qorshaynayo in shirkaas lagu caawiyo dowladda kmg ee Soomaaliya ,
Mss Losaada ayaa sheegtay in in figraddaan ah in loo qabto Soomaliya shirwayne caalami ah uu soo jeediyay R/wasaaraha wadanka Isbayn joos sabateero sanadkii la soo dhaafay isaga iyo Madaxwaynaha wadanka faransiisa Nekola sarkoosi.
Wadanka Soomaaliya ayaa qalalaaso ku soo jray tan iyo markii ay dhacday dowaladdii dhexe sanadkii 1991kii, hayeeshee dowladda haatan ka dhisan ay wado dadaaladii ugu danbeeyay ee ay amaanka iyo kala danbaytii ku soo celinayso .
Sidoo kale waxaa ragaadiyay wadanka Soomaliya kooxo Burcad badeed ah iyo Maraakiib shesheeye oo weerar ku aha khayraadka biyasha Soomaliy dhex ceegaaaga.